Reer Awdal ma xuquuq ayaa ka maqan mise xuquuq dheeraad ah ayay doonayaan? | Qaran News
Reer Awdal ma xuquuq ayaa ka maqan mise xuquuq dheeraad ah ayay doonayaan?
Writen by Qaran News | 11:37 am 21st Jul, 2020
REER AWDAL MA XUQUUQ AYAA KA MAQAN MISE QUQUUQ DHEERAAD AH AYAY DOONAYAAN?.
tabashooyinka sami-qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee Somaliland, waxay ka imanaysaa sedddex jaho oo kala ah:- dadka laga tirada badan yahay, dumarka iyo gobolada aan ku qanacsanayn tirada xubnaha golaha wakiilada ay hadda ku haystaan. Waxaan se halkan si kooban isu-dultaagi doonaa haddii Alle idmo tabashada gobolka Awdal.
Gobolka awdal waxa uu ka mid yahay, gobolada uu ka jiro saluuga ugu badan, marka la eego saamiga uu hadda ku haysto goloha wakiilada.
Waxa kale oo aynu ognahay in markasta oo la soo hadal qaado doorashada golaha wakiilada ay xaraaradda siyaasada ee gobolka awdal cirka isku shareerayso.
Hadaba su’aashu ugu mudani waxay tahay, gobolka awdal ma xaq uu leeyahay baa ka maqan, mise waxa uu doonayaa in xaq dheeraad ah loogu daro saamiga uu hadda ku haysto golaha wakiilada?.
Inkasta oo laga yaabo in su’aashaa jawaabteeda lagu kala duwanaado, oo ay dadka qaar dhinac kale ka eegi-karaan, anigu se waxaan si dhiirasho leh u odhanayaa, gobolka awdal waxa uu doonayaa in la siiyo sad ka badan inta uu xaqa u leeyahay, waana midda ay salka ku hayso tabashada baasan ee ka jirta gobolka awdal.
Waxa jira halbeegyo ay dunidu wax ku qaybsato, marka laga hadlayo saamiga kuraasta xubnaha golaha wakiilada ee uu gobol waliba ka heli karo tirada guud ee uu qaran leeyahay. Waxa halbeegyadaa ugu caansan oo aynu soo qaadan karnaa, waa ta lagu saleeyo tirada bulsho ee gobol walba ku nool.
Hadaba iyada oo ay jirto in aan Somaliland wali laga sameynin tirakoob dad weyne oo dhamaystiran, kaa soo lagu ogaan lahaa tirada dhabta ah ee gobol walba ku nool, hadana waxa jira minqiyaasyo kale oo gundhig u noqon kara is bar-bar-dhig lagu sameeyo, kala badnaanshaha tirada bulsho ee gobol walba ku nool.
Waxaanaynu soo qaadan karnaa diiwaangalinihii iyo doorashooyinkii faraha badnaa ee Somaliland ka soo hirgalay 18-sano ee ugu den-beeyay. Iyada oo gobolka sool iyo sanaag bari mooyaana inta kala ay si fiican uga qabsoomi jireen doorashooyinkaa iyo diiwaan-galinaha aynu soo marnay.
gobolka maanta ugu cabasho badani waa gobolka awdal, oo marka laga hadlayo arrinta sàami-qaybsiga golaha wakiilada ay meel xaa-saasi ah ka marayso.
Hadaba haddii aan soo qaato tirada kaadhadhka ka qaadatay gobolka awdal diiwaan galintii 2008-kii, oo waliba barigaa reer awdal loogu daray wakhti dheeraad oo ka badan intii markii hore loo qoondeeyay, waxay tirada boqolleyda (percentages) reer awdal ka ahaayeen 16.5% oo muujinaysa inta ay ka yihiin bulshada reer Somaliland.
2017-kii dadkii kaadhadhka qaatay waxay reer awdal ka ahaayeen 14.5% tirada boqolleyda (percentages). Haddii average-ka labadaa tiro lasoo saarana waa 15.5%.
Marka tirada boqolleyda ay haystaan reer awdal lagu dhufto tirada xildhibaanada golaha wakiiladu uu hadda ka kooban yahay, waxay tirada saami ee ay reer awdal golaha wakiilada ka heli karaan noqonayaa 15.5%×82= 12.71 xildhibaan. Halka ay imika ka haystaan 13-xildhibaan. Waxaanay arrintaasi farta ku fiiqaysaa in aanay reer awdal wax ka maqani jirin marka laga hadlayo tirada ay hadda ku haystaan goloha wakiilada.
Bulshada ku dhaqan gobolka awdal iyo kuwa ku dhaqan gobolada kaleba baahida ay qabaan, way ka dhumuc weyn tahay, kuraas ay ku fadhiistaan shaqsiyaad kooban, oo waliba marka ay ku fadhiistaan dheefta ay ka helaan guryahooda oo qudha ku koobnaandoonto.
Waxa haboon in aynu busho ahaa la nimaado dhabihii ayn ku horumarin la hayn dowladnimadeena iyo dhaqaalaheen. Sidoo kale aynu dhisi la hayn bulsh ilbax ah ooh an iyo himilo xab=mbaarsan. Cumar Axmed Cali; cumaraxmed331@gmail.com.